Substance abuse and substance use disorder | USAHello | USAHello
Substance use disorders result from substance abuse. Substance abuse happens when you drink too much alcohol or take too many drugs. Your isticmaalka daroogada iyo khamriga dhaawacdaa jirkaaga iyo noloshaada u waxyeeleysay siyaabo xun.
In USA, dadka ku odhan “aflagaadeeyay” drugs or alcohol when they mean using them too much, ama si xun u. isticmaalka mukhaadaraadka, ku xadgudubka qamriga, and substance use disorder are ways of saying you drink too much alcohol or take too many drugs.
isticmaalka Maandooriyaha disorder saameeyaa caafimaadka iyo nolosha. Marka aad ku tiirsan maandoriyaha ama qamriga, aad dareento sidii aadan ku noolaan karaan iyaga oo aan.
Calaamaduhu waa dareenka iyo isbedel aad qabto sababta oo ah cudurka. Qaar ka mid ah calaamadaha adeegsiga maandooriyaha cudurka yihiin:
Dulqaadanayn khamriga ama daroogada
Dulqaadanayn macnaheedu waa in aad u leeyihiin in ay cabto khamriga dheeraad ah ama ha qaadan daroogo dheeraad ah si ay u dareemaan saamaynta.
Dhibaatooyinka la xiriira ka bixitaanka
-Barashadu waa marka aad dareento xanuun, maxaa yeelay, aad joojiso cabitaanka aalkolada ama qaadashada daroogada. Waxaad dareemi jiran sababta oo ah jidhkaaga waxaa loo isticmaalaa in isagoo khamri ama daroogo ku sugan.
Dhibaatooyinka leh u lahayn in ay daroogada iyo khamriga
Way adag tahay si aad u diiday inuu cabbo badan ama qaadato badan oo daroogada.
Ma ka qayb qaadanaya noloshaada caadiga ah
Waad joojin hawlaha muhiim socday (qoyska, shaqada, ciyaaraha) sababta oo ah isticmaalka khamriga ama daroogada.
xitaa ma joojinta markii wax xun
Waxaad sii wadaan in ay khamriga cabbaan ama ha qaadan daroogo inkastoo aad u ogaato waxa la saamayn xun ku noloshaada. Saamaynta xun yihiin marka ay wax ka dhigaa wax ka sii xun. Tusaale ahaan, cabitaanka aalkolada aad u badan si aad u dareemeynin aad u xanuunsan, laakiin aad sii anyways cabbi.
Haddii aad qabtid jirro adeegsiga maandooriyaha ah, waxaad heli kartaa dhibaatooyin badan oo. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka waa kuwan:
Waxaad naftaada ama qof kale dhaawici kara.
Waxaad bilaabaan inay leeyihiin dhibaatooyin caafimaad. Tusaale ahaan, haddii aad cabtid wax badan oo khamriga aad leedahay karaa dhibaatooyin ku leh beerkaaga, maskaxda, wadnaha, ama caloosha.
Your isticmaalka khamriga ama daroogada ka dhigaysa aad joojin kartaa sameynta howlaha caadiga ah. Tusaale ahaan, aad joojisid in kulan ciyaaraha ilmahaaga socday sababta oo ah isticmaalka khamriga ama daroogada.
Your isticmaalka khamriga ama daroogada saamayn ku shaqadaada iyo qoyskaaga. Tusaale ahaan, aadan inay ka shaqeeyaan sababta oo ah isticmaalka khamriga ama daroogada ma tagaan.
Waxaa jira sababo badan oo aad ku yeelan kartaa disorder adeegsiga maandooriyaha ah. Qaar ka mid ah sababaha kuwanu waa:
Khamriga iyo daroogada waa mid aad u heli karaa halka aad ku nooshahay. Tusaale ahaan, magaalo Mareykanka ayaa baararka badan. Dad badan waxay jecel yihiin in si gudban ka tago saaxiibadood. Cabitaanka khamriga waa wax dadka qabaa waa madadaalo, iyo waa sharci. Waa ay fududahay in khamri aad u hesho sababtoo ah waa qayb ka mid ah nolosha.
If one of your parents has or had a substance use disorder, waxaa ka hawl yar in aad leedahay mid ka mid ah.
Waxaad Caado ka dhigo. caado waa wax aad si joogto ah u sameeyaan sida cadayashada ilkaha ka hor inta aadan seexan. Tusaale ahaan, haddii la cabo khamriga si aad u dareemeynin yar carabka ku adkeeyay iyo si aad u dareemeynin faraxsanaan, laga yaabaa in aad bilowdo in aad cabto, maxaa yeelay, marar badan aad jeceshahay sida laga dareemayo.
Lahaanshaha caqabad kale oo caafimaadka maskaxda. Haddii aad qabto cudur kale caafimaadka maskaxda, laga yaabaa in aad u isticmaalaan qamriga ama maandooriyaha si ay is-Dawada. Is-Dawada waa marka aad u isticmaalaan qamriga ama maandooriyaha si ay u dareemaan wanaagsan.